रामधुनी नगरपालीका कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख माननीय शेरधन राईलाई भब्य स्वागत -
NEXTHINDI OLD SONGS
रामधुनी नगरपालीका कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख माननीय शेरधन राईलाई भब्य स्वागत
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १७, २०७४ समय: ११:४१:१०
झुम्का,फाल्गुन १७ । रामधुनी नगरपालीका पुग्नु भएका प्रदेश नं. १ का प्रदेश प्रमुख माननीय शेरधनराईलाई भब्य स्वगत गरेको छ । रामधुनी नगरपालिकाको कार्यालय अनुगमन गर्ने क्रम्मा प्रदेश प्रमुख राईलाई नगर प्रमुख, उप प्रमुख,वडा अध्यक्ष,वडा सदस्य र कर्मचारी लगायत नगरवासीहरुले बिहिवार एक कार्यक्रम आयोजनागरी भब्य स्वगत गरेका हुन । उहाँ झुम्का जेसिजद्धारा निर्मित सामुदायीक भवन उद्धघाटन र १३ औ पदस्थापन कार्यक्रममा समेत सहभागी हुनु भयो ।
नगरपालीकाको कार्यलयमा संक्षिप्त भेटघाट गर्दै प्रदेश प्रमुख राईले एैतिहासिक धार्मिक स्थलको नामबाट रामधुनि नगरपालीका नामाकरण गरेकोमा नगरवासीहरुलाई सराहना ब्यक्त गर्नु भएको छ । यस नगरको सबै माटो पावन भुमि भएको बताउदै पर्यटक क्षेत्र बिस्तारगरी नगरपालिका आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताउनु भयो । रामधुनी नगरपालीकालाई सुन्दर नगर बिकासकोलागी प्रदेश सरकारले नगरको योजनाको आधारमा साथ र सहयोग गर्ने बताउनु हुदै नगर योजनाबद्धरुपमा जान सुझाव दिनु भएको छ । यहाका चौतर्फि बिकासकालगी नगर अनुगम गर्ने समेत बताउनु भएको छ । नगरमा आफै आएर प्रत्यक्ष अवलोकनगरी योजना बनाई प्रदेशले बनाउने नितिमा सहभागी गराई बिकास तर्फ लाने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाले गाउँ,नगर बिकास गदै प्रदेश एकलाई सुखि र सम्पन्न बनाउने जोड दिनु भयो ।
नगरका प्रमुख जयप्रकास चौधरीले प्रदेश प्रमुख राई समक्ष रामधुनी नगरको परिचय र सम्भावनाहरुको बारेमा प्रष्ट पार्दै लिखित रुपमै हस्तारण गर्नु भयो । प्रदेस प्रमुख राईले प्रस्तुत प्रस्तावना लिदै प्रदेश सरकारले गर्ने सहयोगमा कुनै कसर बाकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नगरपालीकामा भेटघाट पश्चात रामधुनी वडा नं. १ मा नगरपालिका भवन पुर्व झुम्का जेसिजले बनाएको सामुदायीक भवन उद्धघाटन गर्नु भयो । भवन उद्धघाटनका साथै जेसिस बर्ष २०१८ कालागी अध्यक्ष रबिन बरालका समितिलाई १३ औ पदस्थापन समेत राईकै प्रमुख आत्थियतामा सम्पन्न भएको छ । सामुदायीक भवनकालागी नि शुल्क १० धुर जग्गा दाता भव घिमिरेलाई सम्मान गरेको जेसिस पुर्व अध्यक्ष हर्षलाल चौधरीले बताए ।